Ngendlela onobuhle lanamuhla wathungela luthathe indawo outerwear ekhethekile. Ubani nje nempela kithi okungenani kanye akazange ngigqolozele amajazi le ukunitha labesifazane Cardigans! amaphethini Circuitry, Silhouettes nezitayela yalezi onobuhle namuhla zahlukahlukene ukuze akunakwenzeka ihlombe art okweba yezandla ezinjalo. Phakathi naleso sikhathi, funda obumbene indwangu wathungela kungaba, futhi lesi sihloko ezinikele izisekelo lokhu yezandla lasendulo futhi kanyekanye yesimanje.
Ngaphambi kokuba uqale ukunitha nokotini futhi udinga ukuthenga amathuluzi. Ngemva kwalokho, khetha imodeli efanelekayo. Bese ukwakha iphethini ngosayizi ophelele, futhi abale isibalo izihibe oyifunayo ukuze uqale ukusebenza.
Ukukhetha ntambo futhi ukunitha izinaliti
Njengoba wathungela outerwear onobuhle ngokuvamile yazalwa ntambo kunalokho besiyoba sikhulu, Wabasaqalayo craftswomen ke akudingekile ukuba sisuke emasikweni osungulwe futhi ukhethe intambo ukushuba medium ne imitha 200-250 m stogrammovom skein. Ukwakheka kungenzeka iyiphi intambo, konke kuncike izintandokazi knitter. Kungenzeka ntambo yoboya ngokugcwele, ezihlangene ne kwalokho imicu ahlukahlukene - mohair, acrylic, inayiloni, usilika noma ukotini. I Tinhlobo ntambo ayikasekeli ukhawule ukunambitheka namaphunga umcabango knitters.
Ukuze lokuluhlaza kwanoma iyiphi ukwakheka kanye ukushuba isilinganiso spokes ehlelelwe more № 3-4. Uma ukujiya ntambo (120-150 m / z 100), ubukhulu spokes ukukhuphuka № 5-6. Futhi esikhethwe impahla lokho okuthandwa senkosikazi, kodwa kufanele athathe isiyingi ukunitha izinaliti anobude obungalingani: zingase okudingekayo ukwenza ezihlukahlukene lula izinto. Ngakho, ngemuva obumbene lesikafula elula nge 80-85 cm ubude, futhi hose - kwi spokes nge obuphelele encane line ukudoba.
Indlela yokwenza iphethini
Sebenzisa iphethini ekwenzeni amaphethini ukunitha, kuyinto efiselekayo: musa uthola mnandi, kungaba ngcono ukuba ahlale phezu sibalo. ukungakwazi wayo ukwakhela zonke izimiso ubuciko lokuthunga esimweni knitwear nakanjani ezibucayi, ngoba plasticity lendwangu wathungela Kuyamangaza: efihla amaphutha amaningi. Beginners craftswomen, cabanga uthayi elingenamikhono noma Cardigan Ungalandela ngala macebiso alandelayo:
• Khetha imodeli zakho ozithandayo, akusho ukuthi wathungela, elula futhi zikhululekile "ehlezi" emalini nokuba usayizi ofanele.
• Uma ukuma ezikhethiwe wanelisekile ngokuphelele - lena ukhetho kangcono iphethini esizayo. Silhouette adluliselwe ungene iphepha, ngemva kokuhlola nokulungisa (uma kunesidingo) Ubukhulu.
Ukubalwa buttonhole isampula
Uma iphethini usulungile, kubalulekile ukubala inani izihibe adingekayo isethi. Lokhu kuyadingeka ukuze lilingane ezinhle ukuma iyiphi imfashini, ngisho ezifana amajazi wathungela futhi Cardigans spokes. amaphethini izikimu nayo ibalulekile, ngakho ngaphambi abale isibalo izihibe, khetha umdvwebo.
Ukuze abale isibalo izihibe ukuze uthole isampuli isethi provyazyvayut futhi ayisenayo kulinganiswa yakhe. Isibalo izihibe 1 cm leaf siphindwe ngesibalo ukubona imininingwane. Ngakho, ekutholeni isilinganiso esifanele izihibe. Ezimweni eziningi, kufanele kube kuncike ukuguqulwa kuye ngokuthi isibonelo akhethiwe kanye nenani lezihibe iphethini uphinda.
abesifazane Needle nosanda wathatha spokes ezandleni, kungcono ukuqala Amaphetheni alula. Excellent ukubukeka Cardigans ezenziwe e garter Stitch, okuyinto isisekelo umuntu iluphu - .. Face, ie, umsebenzi lo wenziwa kanye kumuntu, futhi ohlangothini reverse of the phambi iluphu. Indwangu wathungela garter ezihambisana efekethisiwe - ngepulasitiki okungukuthi kulula ukuba kusebenze futhi ngempumelelo kakhulu. amajazi wathungela futhi Cardigans spokes izikimu okuyizinto ngakho elula - inketho kakhulu Wabasaqalayo okuyinhloko.
imidwebo Izintandokazi mfunda-makhwelo abaculi - kwesakhiwo. Lezi zihlanganisa alternation okulula izihibe okulungile nokungalungile. Ngokwesibonelo, ngokuvamile kakhulu le outerwear imodeli usebenze iphethini "sibalo", lapho enye ukunitha labo izihibe siyahlukahluka ngamunye okwalandela eliladelayo,. E. Ngenhla purl iluphu provyazyvaetsya ubuso, noHezekeli. Enye can eyodwa, kodwa izihibe ezimbili noma ezintathu. Ungakwazi ukwandisa inani lemigqa, enza uchungechunge 2-3 ngaphandle kokushintsha iphethini, futhi ushintsho 4-irowu loops.
Amaphetheni ezinjalo eziyigugu ngoba kungaba ngokuzimela okukhulelwa noma iyiphi alternation niwalethe imodeli kombhali.
imodeli wathungela ezenziwe iphethini eluka
Ingabe ngaso sonke isikhathi wokwakha neze aphume amajazi imfashini wathungela, Cardigans yakhuluma amaphethini eluka, amahhanisi, lozenges noma Aranov. Njengoba isihloko kuhloswe izilaleli ezingu-knitters, ufune ukuwenza kahle, cabangela-ke amaphethini eluka thina elula. Isithombe siveza isibonelo kwamagoda kunalokho ewumngcingo, kuphenduke amadayimane.
IRapport iluphu iphethini kuyinto 11, m. E. Kufanele ukunitha izinaliti ku imininingwane Ukudayela multiple of 11 + 2 umngcele. eluka obumbene phezu perehlestyvaya purl inkambu umugqa 2 izihibe kwesokunene nezinhlanu kwesobunxele ngamunye. Imigqa ngisho-olunezinombolo (konke) lwenziwa ngesifanekiso aqine. 24 inombolo provyazat, qala ukunitha rhombus, futhi 33-irowu iphethini iyaphindwa kuxhumana.
Amathe kungaba ezincane nezinkulu, ngakuthathu impumuzo. Ukwaluka kungaba uvalwe noma alengayo ngokwanele. Nkosi, yebo, ekhetha, osekelwe kokuhlangenwe nakho bebodwa, izintandokazi isebenza wakhulelwa Cardigans wathungela elingenamikhono spokes. Isikimu, alinikela isithombe, elula, futhi wenza iphutha kuzo cishe kungenakwenzeka. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukwenza web vyvyazyvaya eluka olulodwa enkundleni okungalungile, uyibeka ku longitudinal imigqa abese eyishutheka.
amajazi wathungela futhi Cardigans wakhuluma: amaphetheni isikimu openwork
Okumangalisayo Airy futhi usentekenteke Cardigan elingenamikhono ehlobo. izingubo ezinjalo njalo kumuntu nomuntu, kanti ukuqaliswa ngezandla zaso nakakhulu dwebela nogqozi ezithile. Isikimu ezihlongozwayo siqukethe emchilweni ububanzi "isihlahla sikaKhisimusi", nokuntula alleyways emincane. Lapho efeza lezi zithombe emakhono edingekayo ntambo kwadambisa isimo esasishubile, ngakho Wabasaqalayo emakhosini ukwenza kangcono jumpsuit ifaka, njengoba kuhlongozwa esithombeni. Le ndlela yenza kube lula ukuthola imikhiqizo hhayi ngaphansi umbukwane ngaphandle openwork ngokugcwele ukuluka Cardigan elingenamikhono spokes. amaphethini Circuitry, ngisho bakudala kakhulu, njalo ngomusa, ngakho ntambo onobuhle elinjalo elibekwe ingane kufanele akhethwe tokuyu ngaphezu eluka, noHaran.
Ngokulinganayo ethandwa amajazi zezingane wathungela futhi Cardigans spokes. Scheme (izingane, by the way, kukhona onobuhle eziningi ezahlukene) kanye amaphetheni abathola isahlulelo amazinga kanye zakhiwa imithetho lokuthunga ibhizinisi noma bakopisha yimuphi imodeli efanelekayo. Iphethini bazocula umsebenzi ngokucacile nangokunembile.
Coat Wezingane obumbene kusuka ntambo elithambile, isibonelo, kwibanga kumaqoqo abalulekile. Amaphethini kufanele futhi zibukeke esingaphansi abadala. Excellent imodeli ukubukeka wenza isibonelo esihle kwesakhiwo, ubuso Stitch nebala ehlotshisiwe noma ezinjengenyanga Ithungelwe - lace, guipure obumbene. Isithombe ngaphezulu sibonisa imodeli efanayo nge emaphaketheni ezihambisana "irayisi."
Ngakho, amaphethini ukunitha outwear izogcizelela nobunye bomuntu ngamunye ezinhlelo omdala futhi ngeke ukuhlobisa ikhabethe womntwana.
Nobhasikidi Izigaxa: isinyathelo master ekilasini
Izinkuni izinto - elula, ephephile, ewusizo